I-Poker, enye enye ingxaki-i-Geofumadas
I-Poker, enye enye ingxaki
NgoJanuwari, 2010 Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
Kwiinyanga ezithandathu ezedlule i-Pokersapiens yavula iingcango, isikolo se-poker apho abafundi be-5,000 baqedile amadidi abo ahlukeneyo we-undergraduate, idiploma kunye nenkosi. Le mihla, kubonakala ngathi ubunzima bezoqoqosho buphelile, enye imidlalo ye-intanethi ibonakala iphinda iphinde iphinde ibuye iphinde iphinde ikwazi ukuba yiyiphi i-Pokersapiens enikezelayo, apha ndiyishiya ibaluleke kakhulu:
El Hayibo yinto yamanqaku emakhadi, okungaxhomekeke kuphela kwinqaba; Kukho izibalo, imathematika nemigaqo yoluleko ukuphucula imemori engasetyenziswa ukufumana iziphumo ezilungileyo. Ngenxa yoko, i-Pokersapiens ivela njengenye indlela enomdla wokufunda ukudlala i-Poker, ekudlulayo ikhululekile.
IDiploma Leli bakala labaQalayo, abangazange badlale kwi-intanethi, nangona banokuba benze ngokwenza. Kujoliswe nakwabo abangazi nto nto kwaye bafuna ukuqala ukususela ekuqaleni.
Bachelor. Oku kubasebenzisi abanomgangatho othile wolwazi, abanethemba lokuphucula umgangatho wabo kwaye bafunde amaqhinga amasha.
INkosi Le yilabo abasesigxina kwi-poker, abanqwenela ukwazi amaqhinga aphambili kunye neengcinga abangazange bazi.
Emva kokuba ufunda, i-Pokersapiens ihlawula iipasipoti zokuqala ukuze unokubonisa ubungqina bakho kwaye ufumane imali ngaphandle kokubetha imali yakho.
Post edlulileyo«Edlulileyo uDig, ukuqala ukucinga
Post Next Geoinformatics, ukushicilelwa kwamuva 2009Okulandelayo "